बन्दाबन्दीमा गृहविज्ञान रञ्जु पाण्डे
बाह्रखरी - शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७
एक सहकर्मी भाइलाईफोन गरेँ । जवाफ आयो “नमस्ते म्याडम, सन्चै हुनुहुन्छ ?”
“म सन्चै छु ,अनि तपाईं कता हुनुहुन्छ ?”
“म घर वरिपरि नै छु म्याडम, कहीँ जाने कुरा भएन । घरमै बसेर काम गर्दैछु, शरीर यहाँ छ मन उतै छ ।”
मैले सोधें, “मन कता छ ?”
“कहाँ हुनु अफिसतिर नि”जवाफमा आयो ।
केहीबेरको कुराकानीपछि पछाडि कोही बोलेको सुने ।
“हैन कस्तो नपरेको हो आज त !”
गाइँगुइँ सुन्दा अन्दाज लगाएँं र जिस्क्याँउदै सोधेँ – “तपाईँलाई पनि खाने परेन ?”
उसले हाँंस्दै जवाफ दियो – “मैले आफ्नो त राम्ररी हेर्नै पा’छैन म्याम।” “तास खेल्दै हुनुहुन्छ?” “हजुर यस्सो बसेर...।”“ल ! ल ! मनलाई कतै जान नदिई शरीरमै राखेर खेल्नु होला ।”
“वर्क फ्रमहोम भन्या छ केहि नगरी पनि भएन । अफिसमा भएको भए मिटिङमै बढी व्यस्त भइन्थ्यो, ल्याएको डकुमेन्टमा सही गर्न पनि भ्याइन्नथ्यो । छिनछिनमा एक न एक स्टाफको कुरा सुन्दा र सल्लाह दिँदादिँंदै इमेल चेक गर्ने र फोन उठाउने समेत फुर्सद हुन्नथियो । अब त्यो सबै काम घरबाट गर्न मिलेन ।”
अधिकांशतस् कामको प्रकृतिअनुसार घरैबाट पूरै गर्न संभव हुन्न । तर मानिसहरू यो भन्न रुचाउन्नन् र जे गर्दैछन् त्यसैसँग आफूलाई मिलाउन हिचकिचाउँछन् । मन र शरीरलाई बाँड्ने यस्तो एउटा वर्ग घरघरमा थुनिएको छ ।
अर्की एक जना सहकर्मी भन्छिन् – “मेरो त दिनमा सातचोटी झगडा हुन्छ बूढा (पति)संँग । जति भनेपनि हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा गाह्रै रहेछ । सासुससुराको अगाडि पतिले घरको काममा सघाउन चाहेर पनि अघि नसर्ने । ऊ गर्दैन, मलाई रिस उठ्छ अनि झगडा भइहाल्छ ।”
कामदार महिला कमसेकम घरबाट बाहिर रहँदा घरेलु कामबाट अलि फुर्सदिला हुन्छन् । कामबाट फर्केर आउँदा जागिरे बुहारी भनेर सासु ससुराले गर्ने व्यवहारमा फरक देखिन्छ । तर अहिलेको बन्दाबन्दीमा भने घरको काममा अग्रपंक्तिमा बुहारी नै पर्ने धेरै परिवार छन् । आफूले केही काम नअह्राई हुर्काएको छोरालाई बुहारीले अह्राएको वा छोराले बुहारीलाई सघाएको देख्दा प्रायः आमाबाबुको आँखा बिझाउँछ । यस्तोमा क्रोधलाई मनैभित्र ‘लक’ नगरी पतिसंँग झगडा गर्नु नै सार्थक ठान्छिन् उनी ।
“बिहान बेलुका भेट हुन्थ्यो, त्यति धेरै समय नै हुन्नथ्यो । सातामा एकदिन बिदा । यताउता गर्यो, बाहिर खानजाने, आफन्त भेटघाट गर्दै रमाईलो मै बितिरा’थ्यो । हैन, यो चौबीसै घन्टा त हामी एक अर्कालाई नचाहिने पो भा हो कि खै ?कुरै मिल्दैन बा ! मैले बोल्या उल्लाई चित्त बुझ्दैन, उल्ले गर्या मलाई चित्त बुझ्दैन ।”
“म त पहिला पनि लकडाउनमै थिएँ अनि अहिले पनि । मेरो आफ्नो लागि त केहि पनि फरक पर्या छैन । बरु पकाउने खाने काम भने थपिएको छ । तैपनि घरमा सबै परिवार सँधै वरिपरि पाउँदा खुसी चाहिँ लाग्छ है ।”
“तिम्रा हात किन खस्रा, कुर्कुच्चा किन फुटेका रहेछन् अहिले पो था’भो । यो भाँडा माझ्ने साबुन राम्रो रहेनछ बुझ्यौ? कस्तो खस्रो भो । हात हेर त, अलिकति क्रिम ल्याउत, लगाऊँ ।”
घरबाट काम र अनि घरमै कामबाहेक लैंगिक आँखाले या मनोसामाजिक चस्मा लगाएर हेर्ने हो भने पनि माथिका यस्ता केही संवादले अहिलेको बन्दाबन्दीमा घरघरमा देखिने विविध परिदृश्यलाई झल्काउँछ । तर, यी विविधतामा पनि एउटा समानता भने भेटिन्छ – त्यो हो ‘परिवार’ । केही अपवादलाई छाडेर यतिबेला सबै घरघरमा आफ्नो परिवारसँग छन् । अहिले हामी सामाजिक जीवनबाट टाढा छाैँ । बनाइएका थुप्रै नाता सम्बन्ध, ईष्टमित्रबाट हामीलाई टाढा रहनु भनिएको छ । ‘सोसियल डिस्टान्सिङ’ सामाजक दूरी भन्दै हामीलाई घरघरमा बन्द गरिएको छ । घरमा बस्दा उकुसमुकुस भएर बाहिर रमाउनेलाई समेत घरैमा बस्न बाध्य बनाइएको छ ।
यतिबेला ‘घर’, ‘परिवार’, ‘परिवारको महत्त्व’अनि परिवारको अगाडि बाँकी सबै सम्बन्ध गौण रहेछ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ समयले सिकाएको छ । घर बाहिर जान बन्देज छ, अधिकांश मान्छेको आफूभित्र छिर्ने बानी नै छैन । बाँकी रह्यो बीचमा परिवार र यिनैसँग बिताउनु पर्दा पो थाहा भयो कि बाहिर विकल्प थुप्रै भएर पो परिवार ओझेलमा परेको रहेछ । अन्ततोगत्वा जीवनमा बिसाउने थलो त परिवार नै रहेछ । बाहिरी जगतको पहुँच हुँदा पो परिवार ओझेलमा परेको रहेछ । अनि घुर्की लगाउने भाँडो बनाइएको रहेछ । सामाजिक पुतली हुने चाहमा हाम्रो सन्तुलन बिग्रेको रहेछ । हामीले परिवार र समाज मिलाउन नसकेको पो रहेछ । बन्दको समयमा घरघरमा पकाइएका मीठामीठा परिकार परिवारसँग रहेर खाँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देख्दा महसुस भयो बिदाको दिन बाहिर होटेलमै गएर खाएपछिमात्र रमाइलो हुन्छ भन्ने मानसिकता गलत रहेछ ।
‘‘दिनभरि घर बसेर पत्नी सिरियलमात्र हेर्दिरहिनछिन्, मेरा आफन्त ईष्टमित्र घरमा आउँदा उनीहरूबाट पाउने तारिफमा यिनले निकै पो परिश्रम गरेकीरहिछिन्’’ भन्ने हेक्का पनि भयो होला केही पतिहरूलाई । ‘‘लैंगिक भूमिकाले आफ्नो भागमा परेको घरधन्दामा ममात्र हैन मेरा पति पनि उत्तिकै निपुण रहेछन्’’ भन्ने हेक्का केही पत्नीलाई पनि पक्कै भयो होला ।
सूचनाप्रविधि अनि कम्प्युटर विज्ञानबाहेक अरू त पढ्ने विषय नै होइन भनी ठान्ने एउटा पुस्ता अर्थात् छोराछोरी बाहिर खान नपाएर छटपटिँदै अहिले घरघरमा गृह विज्ञान पढ्दै छन् । ज्वानो कस्तो हुन्छ ? मेथी, जिरा, धनियाँको गेडा कस्तो हुन्छ ? तरकारी पकाउँदा के पिस्ने ? के फुराउने ?कति पकाउने ?यो सब थाहा पाउन छोरा छोरीलाई फुर्सद छ अहिले । “कम्प्युटर विज्ञान पढे पनि साइडमा म त कुकिङ पनि सिक्छु ।” कमसेकम बेलैमा यसको महत्त्व बुझ्यो छोराले । आफूले तयार गरेर, पकाएर खाँदाको आनन्द आफैँमा एउटा पथ्य हो भन्ने बुझ्ने अवसर दिएको छ आजको लकडाउनले हामीलाई ।
“बाँच्नको लागि त सामान्य रासन, दूध, औषधि अनि मनोरञ्जनको लागि एउटा टीभी, मेरो त खर्च नै कम भएको छ यो लकडाउन ले त ।” अकी एउटी मित्र आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन् । हो त नि ! वास्तवमा हाम्रो धेरै खर्च त देखाउनका लागि पो रहेछ । आफ्नै लागि त कहाँ धेरै चाँहिदो रहेछ र ! यद्यपि वर्तमान परिस्थितिको सामाजिक दूरीले सिंगो देश र विश्वकै अर्थतन्त्रमा पर्न गएको प्रभाव भने अर्थविद्का लागि अध्ययनको नयाँ विषयको रूपमा जन्मिएको छ ।
कोठामा कस्तो पर्दा रहेछ ? दराजमा कति लुगा रहेछन् ? कौसीमा कति फूल फुलेछन् ? बुबाको दाह्री कति फुुलेछन् ? आमाको अनुहार कति चाउरी परेछन् ? मीठोमीठो पकाएर खुवाउने गरेका ती हात कति फुटेका रहेछन् ? यो सबै हेर्न मनग्गे समय छ अहिले । घरैमा पढ्न सकिने यति धेरै आयाम हुँदाहुँदै पनि यदाकदा सामाजिक सञ्जालमा ग्याँसको चुल्होको प्वाल गनेर ‘काम नभएको’ प्रतीकात्मक सन्देश दिएको पाइन्छ । लौ है ! एकपल्ट सोचौँ कहीँ हामी चुक्दै त छैनौँ परिवारको महाकाव्य अध्ययन गर्न ?
सामाजिक प्राणी भएर अहिलेसम्म हामीले धेरै पढिसक्यौँ । राजनीति पढ्यौँ अनि आफूलाई स्थापित गर्न, उचाइमा(?)पुर्याउन धेरै कूटखेल गर्यौँ । अर्थशास्त्र पढ्यौँ, सहरमा एक टुक्रा घडेरी किन्न रातदिन आफूलाई खियायौँ । इतिहास पढ्यौँ, अतीत समातेर ‘त्यो आज किन छैन’ भनी कुण्ठित भई नै रह्यौँ । भूगोल पढ्याैँ, भूमण्डलको अरू प्राणीको जीवन देखेर आहारिस गरी नै रह्यौं । यति धेरै पढ्दापढ्दै परिवार पढ्ने समय भने हामीलाई कहिल्यै भएन । हामी यति धेरै सामाजिक भयौँ कि आफ्नो घर, कोठा, दराज, कुना काप्चामा कहाँ के छ भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कति फ्रेन्ड (?)छन् भन्ने हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण भइदियो ।
परिस्थितिले बाँधेर घरघरमा लक्डडाउन भएका हामी सबैलाई यो एउटा ठूलो अवसर हो गृहविज्ञान अध्ययन गर्ने । घरमा बसेर परिवार पढ्ने, आफूलाई केलाउने अनि सम्बन्ध सुधार्ने । प्रतिभा देखाउने, क्षमता तिखार्ने, पारिवारिक एकता छोराछोरीलाई सिकाउने, एकअर्कालाई बुझ्ने अनि यो सबैको केन्द्रबिन्दु ‘घर’ रहेको साबित गर्ने । अध्ययन गर्ने यति ठूलो महाकाव्य आफूसँगै हुँदा पनि एक मित्रलाई हालखबर सोध्दा उनी यसरी जवाफ दिन्छिन् – “हाल बेहाल छ, बहुलाउनमात्र बाँकी छ । खायो, भाँडा माझ्यो, सुत्यो, उठ्यो, फेसर खायो...।”